Musangano mukuru email template
Email template yekuzivisa kutora kwako kutora chikamu mumusangano...
Imeyiri template yekukumbira kweshoko
Nderipi zano rekuwana kusimudzirwa muna 2022?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Sep 16, 2018 | Ukama hwehukama
Kutsigira chinhu chinokosha muupenyu hwezuva nezuva uye munzvimbo yebasa. Munyika yebasa, uwandu hwekusimudzira huchakupa mukana mukuru uye kunyanya kunyanya kana iwe uri kutarisira mafaira akakosha. Kuti unzwisise zviri nani nheyo dzekutendesa uye zvinokonzerwa nekukurukurirana kwekambani, tinokukoka iwe kuti uite zvinyorwa zvedu kusvikira pakupedzisira.
Chii chinonzi kutaura?
Iko shoko rinotsigira rinouya kubva kuChirungu-akaberekwa Assertiveness, pfungwa yakatangwa neNew York nyanzvi yepfungwa Andrew SALTER ku1950. Joseph Wolpe akakurudzira pfungwa iyi nekuitsanangura se "kusununguka kusununguka kwemanzwiro ose kuenda kune mumwe wechitatu, kunze kwekufunganya".
Kutsigira inzira yekuratidza kuzviziva pasina kuchinja vamwe, uye izvi nenzira yakananga. Kune rumwe ruvoko, kutenderera kunopikisa zvitatu zvinowanzoonekwa nemafungiro emunhu ekubhururuka, kushandiswa uye kurwisana. Izvi zvinotungamirira mukutaurirana kusina kunaka uye zvinokonzera kukakavara, kukakavadzana pakati pevatauriri, kusanzwisisana uye kuparadza kwemazuva.
Kutsigira kunopesana nekuzvidzora pane chikamu chetsanangudzo yaro kunosanganisira kuzvidzora. Saka zvakakosha kuzviziva uye kuzvibvuma sezvatiri. Nenzira yakasiyana, kuzvidzora kunoreva kupesana nekuzviziva uye zvinodiwa, kunyanya kana mumwe munhu asingafungi, achitya, anotya kana zvimwe. Saka ihwo mubvunzo wekusarudza kusateerera kwemazwi kune manzwiro ako, maitiro, unhu ...
Assertiveness uye isiri-yekutaura kutaurirana
Assertiveness inofanirawo kuenderana yako isiri-yekutaurirana kutaurirana. Kana iwe ukataura nemunhu, meseji yako inonzwika 10% nekutenda kumazwi uye zvimwe zvese inyaya yemafungire, masaini uye matauriro ezwi kunyanya. Nekudaro, zvakakosha kuti usaite iko kukanganisa kwekutarisa chete pamuromo meseji sezvo chimiro chakakoshawo zvese mukuratidzira uye mukutaurirana kwakawanda.
VERENGA Nzira yekugadzirisa sei ukama nemutungamiriri wake?
Vadzidze nezvaunomuitira asi zvinoda zvikuru muviri, nokuti zvinoenderana zvinhu zvakadai kwemwoyo, ganda matauriro, mudzidzi dilation ... Saka, kuitira Maererano pakati nemashoko uye nezvaunomuitira, akakodzera mhinduro vose nyika yaizova nemwoyo nezvenyaya yacho. Tinokumbira izvi maererano congruence.
Kuungana kunovimbisa kuumbwa kwehutano hwakanaka hwehutano. Kukurukurirana kusina ungano kunoreva kushandiswa. Iyi yekupedzisira yekukurukurirana, zvisinei, inoda simba rakawandisa rekuchengetedza mutauriri wayo muono chaiwo. Nokudaro kuvhiringidzika pakati pemashoko okuti "kutaurirana", "simba rekunyengetedza" uye "kushandiswa".
Kukurukurirana kana ukama
Kukurukurirana ndiko kupatsanurana pakati pevatauriri vaviri, asi kushandurana hakusi kutaurirana. Nokudaro, zvinokoshawo kuti tive nekunyatsoreva zvinoreva izwi iri, rave richangoshandiswa mumamiriro ezvinhu asina kunyatsopindirana neshoko rayo rechokwadi.
Chokwadi, kuve mutauri akanaka zvakare zvinoreva kuve nekwaniso yekuvhurira waanotaura naye, kuti anyatsoona zvaanoda uye asaunze pfungwa dzake sevanhu vega vane mvumo yekutora. Naizvozvo pane musiyano chaiwo pakati pekufananidzwa kwekutaurirana nekutengeserana kana zvimwe zvinofambiswa izvo zvinowanzo kuve zvisina kunaka kubata uye chinangwa chiri chekumanikidza vateereri kuti vatore pfungwa.
Muchiitiko ichi, kushandiswa kunoratidza kuvepo kweukama, pakati pevanhu vaviri, zvichibva pane zvinodiwa izvo mumwe nomumwe anogona kupa kune imwe. Mukati, hukama uhwu hunopa zvipo kune mumwe kune zvinokuvadza kune imwe.
VERENGA Nzira yekubudirira sei kubatanidza muchechi itsva?
Kutsigira kurwisa kushandiswa
Apo mutengesi anotengesa chigadzirwa asingatombozivi chaicho chidikanwi chevatengi vake, asi nokuda kwechinangwa chekutengesa zvinhu zvake, tinogona kutaura kuti kune kushandiswa. Muchiitiko ichi, mutengi anofanira kuziva kuti angava sei akasimbisa kuburikidza nekuita kuti azive zvaanoda uye zvinetso uye achisarudza chete zvigadzirwa zvinosangana nazvo. Kuti udzivise rudzi urwu dambudziko, kambani ipi neipi inofanira kutarisa pane zvinodiwa nevatengi vayo vasati vaendesa mberi mabasa ayo kana michina. Kana zvisina kudaro, zvakaoma kuvimbika kuti vaite kuti vashandise zvinhu zvakatengeswa.
Kana iwe uchinge wakaedzwa kuti ushandise kugadzirisa kutengesa chigadzirwa kana pfungwa, wedzera kukwanisa kwako kuva nehanya nemamiriro ezvinhu kana zviitiko zvakasiyana. Iko pamusoro pekugona kwako kuzarura kune munhu wauri kutaurira uye kuziva zvaunoda zvisinei nokuti unomira kupi. Zvinoreva kutora chiratidzo mu "4", iyo yepakati uye yenguva. Icho ndechokufungisisa zvakaitika kare, nzvimbo yaakabata uye iyo yaanobata ...
Matanho ekutevera nekukurukurirana kwakanaka
Pasinei nokuti iwe unoshanda mumabasa ekuchengetedza kana kutarisirwa kwematare ekambani, usaita chikanganiso chokuchera shoko remuteereri kuti upindure pakarepo uye kuchengetedza nguva. Mupe mukana wokutsanangura dambudziko rake kana kuti nei achida kusarudza chimwe chigadzirwa pane chimwe. Nokudaro, kana iwe uchida kupa imwe chigadziro kana sarudzo, acharamba achida kugamuchira uye kugamuchira pfungwa dzako. Kunyange zvazvo munhu akatsamwa acharamba achizvidzivirira.
VERENGA Kunzwisisa mupfungwa kubasa
Munhu ane simba anokwanisa kuratidza kuzviziva kwake kana kuzvisimbisa. Vamwe vanozviita zviri nyore, vamwe havaiti. Muchiitiko ichi chechipiri, kushungurudzika kungave kwakadaro zvokuti kunopararira mumuviri wose uye kunokonzera hasha nekutsamwa. Saka zvakanakisisa ndezvekutaura zvakananga izvo munhu anofungidzira asina kutsauka kubva pachidzidzo uye pasina kurwisa mutauriri wake.
Kubvuma uye kupindura kunodzoka
Hapana chirevo chakakwana, zvose zvine chikanganiso. Kazhinji yenguva, ndivo vatinonamata navo vanoona izvi zvisina kukwana. Kugamuchira pfungwa yevamwe kunoreva chido chokuvandudza kana kusununguka kune pfungwa itsva. Kukanganisa kwaizove kukuramba kusakwana kwevanhu vose uye kuzvisarudzira kune pfungwa dzepakutanga.
Nzira yekukurukurirana yaunayo iye zvino ndeyekuita kwemakore akawanda emitambo. Uyewo, tarisira kuti unofanise kuita imwe nguva yenguva usati waziva mazano ekutendesa. Dambudziko guru nderokudzidza kuti ungateerera sei zvinobudirira kuti uzive zvaunoda, iwe zvishoma nezvishoma unodzidza kupindura usina kuita zvechisimba. Nokudaro, kutenderera ndiko kuenzanisa kwakanaka pakati pekusazvibata uye kuita utsinye.
mafungiro Svondo 15th, 2018Tranquillus
pashureNzira yekukudziridza sei simba rekutenda?
zvinoteveraTsvaga muganhu pakati pehupenyu hwehupenyu uye hwehutano
Kunzwisisa mupfungwa kubasa
Basa rakanaka reboka
Nzira yekugadzirisa sei shamwari yako ane mafungire akaipa?
Kuvandudza Kutaurirana Kwaunenge Uchinyanya Kuita Pabasa
kutaurirana kwakanyorwa uye nemuromo - kudzidziswa kwemahara (19) kodzero (203) Yemunhu uye yehunyanzvi budiriro yemahara kudzidziswa (51) Entrepreneurship yemahara kudzidziswa (94) Excel yemahara kudzidziswa (33) Professional kudzidziswa (112) chirongwa manejimendi yemahara kudzidziswa (17) mutauro wekunze kudzidziswa mahara (9) Mitauro yekune dzimwe nyika nzira uye kuraira (22) Software uye Maapplication emahara kudzidziswa (23) Tsamba muenzaniso (20) mooc (203) zvishandiso google zvemahara kudzidziswa (14) PowerPoint yemahara kudzidziswa (13) Yemahara webmarketing kudzidziswa (75) Kudzidziswa kwemahara kwemashoko (13)